Ho Vita ao Anatin’ny Roa Volana Ihany ve Ilay Fifindrana?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Chichewa Chitonga (Malawi) Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galicienne Galoà Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Norvezianina Oromo Ourdou Ouïgour (Sirilika) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tajiki Tankarana Tarasque Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Vezo Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Ho Vita ao Anatin’ny Roa Volana Ihany Ve?
Faly be ny fianakavian’ny Betelan’i Etazonia, tamin’ny zoma 5 Jolay 2013, rehefa nilaza an’izao i Anthony Morris, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana: “Vita ny fifanarahana momba ny fivarotana an’ireo tranobe enina, anisan’izany ilay eo amin’ny 117 Adams Street sy 90 Sands Street eto Brooklyn. * Tsy maintsy miala amin’ireo Tranobe Voalohany ka hatramin’ny Faha-5 isika, alohan’ny tapatapaky ny Aogositra ho avy izao.”
Asa goavana ilay izy, satria mitovy velarana amin’ny kianja filalaovam-baolina 11 be izao ny velaran-tany misy an’ireo tranobe dimy. Tsy maintsy niala tao amin’ireo trano ireo tao anatin’ny roa volana anefa ny fianakavian’ny Betela.
Nisy milina fanontam-pirinty sy fanakambanam-boky tao amin’ireo tranobe dimy ireo, nandritra ny taona maro. Nafindra tany amin’ny toerana vaovao any Wallkill, any New York, anefa ireo milina ireo tamin’ny 2004.
Natao toerana fanatobiana entana sy toerana fikojakojana ireo tranobe ireo, taorian’izay. Fitaovana ampiasaina amin’ny fanorenana sy kojakoja ho an’ny birao no natao tao, ary izay zavatra hafa ilaina amin’ny tetikasa fanorenana any Etazonia sy any an-tany hafa.
Nisy lamina maty paika natao mba hahafahana hiala tao amin’ireo tranobe ireo tao anatin’ilay fotoana nomena. Natao lisitra aloha ny entana rehetra tao amin’ireo trano, mba hahitana an’izay hamidy na hariana na hotehirizina. Nisy fandaharana maromaro natao mba hialana haingana tao amin’ireo trano, nefa koa natao izay tsy hahitan-doza.
Niasa mafy ny fianakavian’ny Betela tamin’ilay fifindrana. Nisy mpiasa an-tsitrapo tsy maharitra 41, avy any amin’ny faritra maro any Etazonia, nantsoina mba hanampy azy ireo. Tovolahy mpitovo sy matanjaka ny ankamaroan’ireo mpiasa an-tsitrapo ireo. Nantsoina mba hiasa tany amin’ny Betela nandritra ny iray volana sy tapany ka hatramin’ny roa volana sy tapany izy ireo. Nila nandao ny fianakaviany sy ny namany ary ny asany izy ireo mba hanaovana an’izany. Inona no tsapan’izy ireo?
Hoy i Jordan, tovolahy 21 taona avy any amin’ny Fanjakan’i Washington: “Tahaka izay mba nalefako taloha kokoa ny fangatahako.”
Avy any Texas i Steven, izay 20 taona. Hoy izy: “Tsapako hoe anisan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena mazoto miasa sy falifaly aho!”
Hoy i Justin, tovolahy 23 taona: “Tena mahatamana ahy eto amin’ny Betela. Be fitiavana sy hendry ry zareo eto sady mpinamana be daholo.”
Avy any Porto Rico i Adler, izay 20 taona. Hoy izy: “Tsy mora tamiko aloha ny nifoha maraina e! Nahazo namana vaovao anefa aho tatỳ, ary ho mpinamana mandrakizay izahay.”
Hoy i William, izay 21 taona: “Nofinofiko hatramin’ny mbola kely mihitsy ny ho ato amin’ny Betela. Nieritreritra aho hoe ho very any aho sady hanirery. Tena diso hevitra anefa aho. Tsy mbola nisy zavatra nahafinaritra ahy hoatran’ny tato amin’ny Betela aloha e! Tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny manompo eto.”
Vitan’ireo mpiasa mazoto ireo ara-potoana ihany ve ilay asa? Latsaka ny roa volana aza no namitany azy, satria tao anatin’ny 55 andro dia vita ilay fifindrana.
^ feh. 2 Amin’ny 2017 kosa no hialana ilay tranobe eo amin’ny 90 Sands Street.
Veloma ry 117 Adams Street